Oké ọkọchị napụrụ Chuvashia akụkụ dị ukwuu nke owuwe ihe ubi nke ihe ọkụkụ gbanyere mkpọrọgwụ na ihe ọkụkụ - akwụkwọ akụkọ "Potato System"
Mpaghara mfu ihe ubi dị ihe dị ka puku hectare ise, ihe dị ka ụlọ ọrụ ugbo 53 nke mpaghara ahụ metụtara.
Ndị nchịkwa ewepụtala usoro ihe mberede nke mkpa mpaghara na mpaghara Chuvashia niile.
Ndị na -emepụta ihe ubi na mpaghara Shemurshinsky na -akọ nnukwu mfu na ịkọ beets shuga. Oleg Kuznetsov, onye isi ụlọ ọrụ Kolos, na -adọta uche na obere nha na ịdị arọ nke ihe ọkụkụ na -ekwu ma na -etinye ihe dị ka puku iri atọ na puku abụọ na hectare ọ bụla, n'ozuzu, mfu nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya nwere ike iru nde 32 nde rubles.
Oké ọkọchị ahapụbeghịkwa ala nduku. N'afọ a, n'ihe gbasara ọnọdụ ihu igwe, ọ bịara ka njọ karịa ka echetara n'afọ 2010, ahụghị mmiri ozuzo site n'oge ịgha mkpụrụ. Na mbụ, mkpụrụ nduku bụ opekata mpe 190-200 c / ha, ugbu a ọ bụ ọkara, ebe poteto niile pere mpe.
Oké ọkọchị ahụ ahapụghị nlebara anya na ihe ọkụkụ. Oleg Alekseev, onye isi ngalaba ọrụ ugbo na gburugburu ebe obibi nke mpaghara Shemurshinsky, na -ekwusi ike na owuwe ihe ubi na mpaghara ahụ emechaala nke ọma, egbute puku tọn 33, nke bụ 30% erughị afọ gara aga.
Mpaghara asatọ ata ahụhụ site na ụkọ mmiri na mpaghara: Shemurshinsky, Yantikovsky, Kozlovsky, Yalchiksky, Urmarsky, Batyrevsky, Komsomolsky na Kanashsky.
Alina Semenova, ime ejije Onye minista na -ahụ maka ọrụ ugbo nke Chuvashia, dọtara uche gaa n'eziokwu na ugbu a, a na -arụ ọrụ iji mepụta atụmatụ nke usoro iji belata oke mmebi, kwadebe akwụkwọ dị mkpa maka mbufe na Ministri Ọrụ Ugbo. Site na iwebata usoro ihe mberede, ndị na -emepụta ihe ubi nwere ike ọ gaghị akwụ ụgwọ, yana nweta nkwado steeti pụrụ iche.
N'okpuru iwu ọhụrụ gbasara mkpuchi ọrụ ugbo, a na -akwụghachi onye na -emepụta ihe ubi 80% nke mfu ya na mfu nke ihe ọkụkụ n'ihi ihe mberede mberede, nke gụnyere ụkọ mmiri, ọ bụghị 50%, dị ka ọ dị na ụdị iwu gara aga. .
isi: Vesti Chuvashia
Tags: ụnwụ nriRepublic nke ChuvashiaOwuwe ihe ubi nduku 2021